Gabar Somaliyed Oo Quruxdeeda Darteed Qoyskeeda Uga Reebeen Waxbarashadeedii!! - iftineducation.com
iftineducation.com – Sida uu ku soo waramay wariyaha Aayaha Nolosha ee magaalada Nayroobi Saciid Qorsheel qoys Somaliyed oo ku nool xaafada Soo Sii ayaa gabar ay dhaleen ka reebay oo u diiday in ay aado iskuul halkaasi ay ka dhiganeysay muddo bil ah iyadoo guud ahaan dalkaan ay degan yihiin 5 bil waxa ayna ka soo guureen dalka Sacuudiga .
Sababta gabartaan 17-sano jirka ah ee lagu magacaabo Saciido Axmed Dhakjar ay qoyskeeda ugu diideen in ay iskuulkaas aado ku sheegeen in ay u baqeen in quruxdeeda aadka u sareeysa ay fitno u soo jiido .
Warku waxa uu intaa raacinayaa in qoyskaasi laga dhaa-dhicin waayay in gabarta u fasaxaan wax barashadeeda waxa ayna ku adkeeysanayaan in quruxdeeda ay soo jiidaneyso oo ay mashquulineyso arday badan .
Ilo wareedyo ayaaha nolosha ka heleen marqaati qoyskaas ka tirsan oo diiday in magaciisa aynu soo xigano ayaa waxa uu inoo sheegay in aabaha gabartaas uu haatan ku talinayo in gabarta wiil ina adeerkeed ah lagu daro ka dibna ay sidaas wax barashada ku wadato halka hooyadana ay diidan tahay.
Waxii ka soo baxa dhac-dadaan qeybaha dambe ayaan idinkula socod siineynaa haddii alla uu ogalaado.